နို့တိုက်သည့်အခါသင်အရက်သောက်နိုင်ပါသလားသို့မဟုတ်ဆေးဝါးများသောက်သုံးနိုင်ပါသလား။ - ကျန်းမာရေးပညာရေး | ဇန္နဝါရီလ 2022
ရပ်ရွာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ဆီးဂိမ်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကုန်ပစ္စည်း နှိပ်ပါ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး ပြင်းထန်သောအားကစား ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကျန်းမာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကုမ္ပဏီသတင်း
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> အဘယ်အရာကသင့်ရင်သားနို့ထဲသို့အမှန်တကယ်ဖြစ်စေသနည်း။
သို့သော်သင်စားသောအစားအစာမဟုတ်သောအရာများကော။ အထူးသ, ဆေးညွှန်းဆေးဝါးများနှင့်အရက်။ သူတို့နို့တိုက်မိခင်များအတွက်လုံခြုံမှုရှိပါသလား။ သင့်ရဲ့နို့ရည်ထဲသို့ဤအရာဝတ္ထုဘယ်လောက်များများပါ ၀ င်သနည်း။ ကျနော်တို့ထွက်ရှာတွေ့မှအချို့သောကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ check လုပ်ထား။
ဆေးညွှန်းယူဖို့အန္တရာယ်ကင်းလား နို့တိုက်သည့်အခါဆေးဝါးများ ? ရိုးရှင်းသောအဖြေမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ အရ အမေရိကန်ကလေးအထူးကုအကယ်ဒမီအားဖြင့်လက်တွေ့အစီရင်ခံစာ , ကာကွယ်ဆေးအများစုနှင့်ကာကွယ်ဆေးများသည်နို့တိုက်နေစဉ်အသုံးပြုရန်လုံခြုံပြီးသင့်ကလေးအတွက်အန္တရာယ်မရှိပါ။
စံပြဆေးအများစုသည်ကျန်းမာသောကလေးအတွက် (နို့တိုက်မိခင်မှသောက်သည့်အခါ) အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုမေရီလင်းပြည်နယ်၊ Bowie မှမှတ်ပုံတင်ထားသောသူနာပြု Rachael Martin ကပြောကြားသည်။ သူမသည်ဆရာဝန်များ၊ ကလေးအထူးကုဆရာ ၀ န်များနှင့်ဆေးဝါးပညာရှင်များသည်ဆေးဝါးများနှင့်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်အလုံအလောက်မရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအထူးပြုသည့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအတိုင်ပင်ခံသို့မဟုတ်ပညာပေးသူနှင့်စကားပြောခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
နှင့်အညီ, အားလုံး, ဆေးဝါးများတန်းတူဖန်တီးနေကြသည်မဟုတ်။
မေရီလန်းပြည်နယ်၊ ခရော့ဖွန်ရှိမှတ်ပုံတင်ထားသောသူနာပြုနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေးအတိုင်ပင်ခံ Kelly Kendall ကဆေးများသည်ဆေးဝါးအမျိုးအစားနှင့်၎င်း၏ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပေါ် မူတည်၍ အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုဆိုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောမိခင်များအားမညွှန်ကြားမီဆေးဝါးတစ်ခုချင်းစီ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အန္တရာယ်များကိုချိန်ဆစဉ်းစားရမည်။ AAP အစီရင်ခံစာအရစဉ်းစားရမည့်အချက်များမှာ -
အဲဒီနောက်ဆုံးကျည်ဆံသုံးမှတ်ကိုအနီးကပ်လေ့လာကြည့်ကြစို့။ မိခင်နို့ထဲသို့မည်သည့်ဆေးဝါးထုတ်လွှတ်ပြီးသည်နှင့်သင့်ကလေးကလက်ခံသည်ကိုသင်မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဆေးသည်သင့်ကလေးအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
၎င်းသည်ဆေးဝါးနှင့်၎င်း၏ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ မိခင်နို့ရည်တိုက်ကျွေးခြင်းအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောဆေးဝါးကို Dr. Thomas Hale ကအပြည့်အ ၀ လေ့လာခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Hale ရဲ့စာအုပ်, ဆေးနှင့်မိခင်နို့ Pharm.D ဒေါက်တာ Hilary E. Rowe နှင့်ပူးတွဲရေးသားခဲ့သည်မှာယခု ၁၇ ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိခင်နို့တိုက်နေစဉ်ဆေးဝါးကုသမှုဘေးကင်းရေးအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
စာရေးသူများသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးကိုနို့တိုက်သည့်အန္တရာယ်အမျိုးအစား (LRC) ကိုသတ်မှတ်သည်။ ပထမ ဦး စွာသူတို့မူးယစ်ဆေးရဲ့ခြုံငုံအဆိပ်ဆုံးဖြတ်ရန်။ penicillins, sulfas နှင့် NSAIDs (ibuprofen ကဲ့သို့) အချို့သောဆေးဝါးများသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါသည်။ သို့သော်အခြားသူများမှာကင်ဆာဆေးများနှင့်ဆေး antimetabolites ကဲ့သို့အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောနို့ရည်အချက်အလက်များပေးသည့်လေ့လာမှုများကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စာရေးသူက၎င်း၏ပါးစပ်စုပ်ယူ, ပလာစမာအဆင့်ဆင့်နှင့်ဝက်ဘဝပါဝင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့ pharmacokinetics, အားကိုး။ ဤအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စာရေးသူများသည်၎င်း၏ LRC ၏ပညာတတ်ခန့်မှန်းချက်ကိုပြုလုပ်သည်။
ဘလော့တစ်ခုတည်းတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှဆေးညွန်းဆေးများအတွက်ဤအချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြိုဖျက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်တိကျသောဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ရယူနိုင်ပါသည် မွေးကင်းစကလေးအန္တရာယ်စင်တာ ဒေါက်တာ Hale ရဲ့၏အခြားစီမံကိန်းကို။ နို့တိုက်နေစဉ်ကာလအတွင်းဆေးကုသမှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများဖြင့်သင်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။
ကလာသောအခါ အရက်နှင့်နို့တိုက် , အဖြေကိုနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားပါသည်။ မိခင်များအနေဖြင့်အတော်အသင့်သောက်သုံးခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောစည်းကမ်းချက်မှာ အကယ်၍ သင်ကားမောင်းရန်လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါကနို့တိုက်ကျွေးသည်။
အပါအဝင်များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများ, ကလေးအထူးကု၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီ ပြီးနောက် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ သူနာပြုမိခင်များသည်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်မှနှစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ သောက်သုံးရန်မတိုက်တွန်းပါနှင့် (လုံးဝမသောက်သုံးခြင်းသည်အန္တရာယ်အကင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်) ။ ကလေးနှင့်ထိတွေ့မှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အရက်သုံးစွဲပြီးနောက်နှစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်နာရီအကြာသူနာပြုများပြုလုပ်သင့်သည်။ သို့သော်ဤဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနမှာကွဲလွဲနေသည်။
မိခင်နို့တွင်အရက်သည်သွေးမှတစ်ဆင့်ဓာတ်ပြုမှုနှုန်းဖြင့်သွေးကြောထဲမှအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ အကယ်၍ ဝိုင်သုံးခွက်သောက်ခြင်းပြီးနောက်သင်၏သွေးအရက်ပါဝင်မှုသည် ၀.၀၈% ဖြစ်ပါကသင့်အားပြည်နယ်အများစုတွင်ကားမောင်းရန်သင့်အားတရားဝင်ကန့်သတ်ထားမည်ဆိုလျှင်သင်၏နို့ရည်သည် ၀.၀၈% ဖြစ်သည်။
နှိုင်းယှဉ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, ထိုစပျစ်ရည်ကိုမျက်မှန်တစ် ဦး ချင်းစီဖြစ်ကောင်း 10-20% အရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ကလေးသောက်သုံးသည့်နို့သည်သင်၏အဖျော်ယမကာထက်အရက်လျော့နည်းသည်။ တကယ်တော့ဂျာနယ်အတွက်လက်တွေ့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်နှင့်အညီ အခြေခံလက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဝိသဗေဒ မိခင်နို့ရည်မှနို့ တိုက်၍ ကလေးငယ်များသောက်သုံးသည့်အရက်ပမာဏမှာမိခင်သောက်သည့်ပမာဏ၏ ၅ မှ ၆% ခန့်ရှိသည်။ သီအိုရီအရအရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၌ပင်ကလေးများသည်ဆေးခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရက်ပမာဏကိုမမှီနိုင်ကြောင်းလေ့လာမှုအရသိရသည်။ မွေးကင်းစကလေးများသည်အရက်ကိုလူကြီးများ၏ထက်ဝက်ခန့်နှုန်းဖြင့် metabolize လုပ်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာလူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ရေစုပ်ရန်မလိုပါ။ သင့်ရဲ့နို့ရည်ထဲသို့အရက်ဖြတ်သွားသကဲ့သို့၎င်းလည်းဖြတ်သွားသည် အပြင်ထွက် သင်၏သွေးမှပြုလုပ်သည့်နှုန်းနှင့်တူညီသည်။ မင်းသွေးထဲမှာအရက်ပါဝင်မှုနည်းလာတာနဲ့အမျှမင်းနို့ရဲ့အရက်လည်းပါဝင်တယ်။ သင့်ကလေးကိုနို့တိုက်ရန်သောက်စရာများများများစားစားရှိသည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ သင်နိုးနိုးကြားကြားရှိနေစဉ် (များသောအားဖြင့်နှစ်နာရီမှသုံးနာရီလောက်သာလုံလောက်သင့်သည်) ခဏစောင့်ပါ။ ထိုအရည်ရွှေကိုထုတ်ပစ်ကြဘူး!
အကယ်၍ သင်နို့တိုက်နေစဉ်အရက်သို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းဆေးများ၏လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါကနို့တိုက်ကျွေးမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ သင်၏ OB-GYN သို့မဟုတ်သင့်ကလေး၏ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ။
အစီရင်ခံစာ - SingleCare မှအချက်အလက်များအရသြဂုတ်လတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ၀ ယ်လိုအားတိုးတက်လာသည်
ရာသီယူရန်အစီအစဉ်bပြီးနောက်မည်မျှကြာသနည်း
ငါအိမ်မှာ uti ကိုကုသလို့ရမလား